7 Chaiyo Nyika Mienzaniso yeMbwa Imbwa Mutauro neMifananidzo & Quiz - Featured
7 Chaiyo Nyika Mienzaniso yeMbwa Imbwa Mutauro neMifananidzo & Quiz
Kana zvasvika pakunzwisisa imbwa mutauro mutauro, kunyangwe hazvo imbwa dzedu dzisingagone kutaura, hazvifanirwe kunge zvakaoma.
Zvisinei, panogona kunge pasina kana zuva rimwe chete rinopfuura apo varidzi vanoshuvira kuti imbwa dzitaure!
Panogona kunge paine mibvunzo yakawanda yatingabvunza imbwa yedu: Vari kunzwa sei? Kunyangwe ivo vachitoita sekutora iyo tenesi bhora kwenguva ye600th kana ivo vari kungozviitira kuti vatifadze?
Kudzokera kune mutauro wemuviri ipapo, kunyangwe pasina kutaura, imbwa dzinotaurirana, dzimwe dzichinyengera kupfuura vamwe.
Mutauro wemuviri wembwa unotitaurira chaizvo manzwiro avari kuita, isu tinongofanirwa kuziva zvatiri kutsvaga.
Saka kukubatsira kuti unzwisise mutauro wemuviri wembwa, takaisa pamwechete mienzaniso minomwe yehupenyu kuti ikubatsire kuona zviri kuitika mundangariro dzeshamwari yako ine makumbo mana.
Kune avo vane ruzivo, isu zvakare tine inokurumidza imbwa mutauro mutauro chati ine bvunzo yekuyedza ruzivo rwako kumagumo!
1. Tamba Uta - Ndinoda Kutamba!
2. Imbwa Dumbu Rinokwiza - Ndinofara
3. Anotonga kana Aneshungu - Handisvikike
4. Kuzviisa Zvinotyisa - Ndisiye Ndiri Ndoga
5. Nzeve Dzakakanganiswa - Ndiri Kufarira
6. Relaxed & Approachable - Ini ndakadzikama
7. Anotya & Anonetsekana - Handisvikike
Chati Yemuviri Wemutauro Chati
Imbwa Muviri Mutauro Mutauro
Q1 - Chii Chiri Kuitika Pazasi?
Q1 Mhinduro - Anofarira
Q2 - Chii Chiri Kuitika Pazasi?
Q2 Mhinduro - Izvi hazvingagumi zvakanaka
Q3 - Chii Chiri Kuitika Pazasi?
Q3 Mhinduro - Anotya kana Kuzviisa pasi
Q4 - Chii Chiri Kuitika Pazasi?
Q4 Mhinduro - Yakatyiswa kana Kunetseka
Chimwe chezviratidzo zvakajairika zverudzi rwembwa mutauro! Iyo yakakurumbira yekutamba uta. Wese wakazviona!
Chero ani uyo akarera mwana wembwa uchaona izvi nekukasira. Mbwanana dzinodzikisa kumberi kwavo nekunamatira pasi mumhepo. Muswe wavo unenge wakasimudza, kazhinji uchizunza.
Mbwanana dzinoshamwaridzana dzichaita izvi kune chero chinhu, imbwa yavanosangana nayo uye kunyangwe iyo yekuchenesa.
Ivo vanodzidza nekukurumidza kwazvo kuti ndiani anodzorera. Iyo bhegi haiwanzo kuita!
Ivo vanotakura hunhu uhu muhupenyu hwavo hwese - ndiyo yepasirese 'ngatitambe!' kana 'kugadzirira kudzingirira?'. Dzimwe imbwa dzinohukura kana dzichikotama, izvi zvinowanzova bark rakakwira zvakanyanya, nekukurumidza uye nekuchimbidza.
Vamwe varidzi vanofunga kana imbwa yavo ichikunguruka pasi, ivo vari kuzviisa pasi, asi kunzwisisa mutauro wemuviri wembwa mune ino mamiriro kunoda zvishoma kunzwisisa.
Dominance dzidziso yekudzidzisa yakave yakawanda debunked .
Kana imbwa ichikunguruka, rurimi rwuchiyerera mumuromo mavo, kufumura dumbu ravo - unogona kubheja hupenyu hwako, ivo vakangoita kunge vane dumbu.
Miviri yavo ichave yakasununguka, miromo yavo ichave yakashama, rurimi rwungangorembera kunze.
Vachave vakasununguka maziso - vanogona kuvhurika kana kuvharwa.
Dzimwe imbwa dzinozorara seizvi; iwe uchaona inoshamisa yoga poses kubva kurara imbwa! Ivo vanovimba kuti ivo vakachengeteka uye vari chaizvo, vakangonaka.
Mune ino kesi, iye haasi imbwa inofara.
Imbwa ine hasha inosimudza muswe wayo. Nzeve dzavo dzakabatikana uye dzakangwarira. Anogona kunge achirova nekugeda mazino uye mhino yake ichaunyana. Iwe ungango cherekedza mabhureki kumusana kwake (neizvi isu tinoreva kusimudza bvudzi pamafudzi ake uye pasi pemusana).
Vamwe vanotenda imbwa dzinoita izvi kuti dziratidzike dzakakura uye nekudaro dzichityisidzira.
Asi kana tikatarisa iyo kushushikana kupindura muvanhu , kana isu takatarisana nemamiriro ezvinhu anonetsa, huropi hwedu hunoshandura kuwanda kwezviito mumuviri wedu. Izvi zvinosanganisira kumanikidza tsinga dzeropa muganda redu.
Mupfungwa yekushanduka-shanduka, izvi zvaive zvekuderedza kurasikirwa kweropa kana pakaitika mhirizhonga. Mitsinga yeropa yakamanikana inoita kuti bvudzi redu rimire. Isu tinoshamisika kana izvi zviri izvo zviri kuitika imbwa zvakare uye muchokwadi ndosaka avo 'hackles ari kumusoro!'.
Kududzira mutauro wemuviri wembwa mumufananidzo uyu zviri nyore!
Iyi imbwa chete anoda kusara ega .
Imbwa inotya inogona kutenderera izere kumusana kwavo ichifumura dumbu nehuro. Ivo kazhinji vanodzora musoro wavo kure kuti vadzivise kusangana. Nzeve dzavo dzichava dzakatetepa uye kumashure.
Kana ivo vane muswe murefu, inowanzo kuve yakanamirwa pakati pemakumbo avo.
Imbwa zhinji dzinotya dzinovhara maziso avo, zvekare kudzivirira kusangana.
Vari kutarisira kuti kana vakasabatanidzwa, kana kusapindura, mudenhi anongovasiya vega.
Iyo imbwa muviri mutauro pano inoratidza imbwa yako inofarira. Iyi imbwa ine chivimbo kwazvo uye inofarira kwazvo shamwari yayo nyowani kana chinhu.
Mboro yake inowanzo kuve yakatwasuka uye inogona kumenya zvishoma. Iwe unozoona kuti akazendamira zvishoma kushamwari yake nyowani.
Maziso ake akatambanuka, kuti atore ruzivo rwese irworwo. Nzeve dzake dzakabatwa uye dzakapepuka. Kunyangwe achifarira, mamiriro ake akasununguka uye haatyisidzi.
Iyo imbwa yakasununguka uye inosvikika ichave nayo hunhu hwakadzikama zvachose .
Musoro wavo unenge wakakwira, vachiratidza kufarira uye vanofamba vakasununguka.
Mboro yavo inogona kunge iri kumusoro kana pasi, zvinoenderana nerudzi asi ichagara zvakasikwa, kwete kuomarara.
Nzeve dzavo dzinogona kunge dziri kumusoro kana pasi, zvakare zvichienderana nerudzi.
Imbwa yakasununguka inowanzove nemiromo yavo yakavhurika, vanogona kunge vachipuruzira, asi kwete zvakanyanya.
Izvi ndeimwe imbwa inotya , asi vachiri kufunga kuti vanogona kukwanisa kunzvenga mamiriro acho, zvishoma nezvishoma.
Pano iwe uchaona kuti vachatarisa kure, vanogona kutovhara maziso avo zvishoma.
Miviri yavo ichadzikiswa uye vanogona kunge vachifamba kana kufamba zvakanyanyisa; dzimwe imbwa dzinotomutsa paw.
Nzeve dzavo dzichava nhete uye kumashure; miromo yavo yaiwanzo vharwa.
Muswe wavo unenge uri pasi, dzimwe nguva kunyangwe wakakwenenzverwa. Dzimwe imbwa dzinogona kuyedza kudzora muswe wavo zvishoma nezvishoma.
Kuti ikubatsire kudzidza kuverenga imbwa mutauro mutauro, isu tagadzira iri nyore kuteedzera imbwa yemuviri mutauro chati:
Maziso Imbwa yakasununguka ichave ine maziso emuamondi. Dzimwe nguva vanoita kunge vanotswinyira kwauri. Imbwa yakamanikidzwa kana inotya inowanzove iine vadzidzi vakawedzeredzwa uye vachena vakatenderedza maziso avo vanenge vachiratidzwa. Imbwa dzinotya kana dzinonetseka dzinowanzo tarisa kure uye dzivisa kusangana kwemaziso. Imbwa dzine hukasha dzimwe nguva dzinotarisa; kana imbwa mbiri dzakakiya dzakatarisa, hazviwanzo kupera zvakanaka.
Muromo Imbwa inofara, yakarara kumashure ichave nemuromo wakasununguka. Inowanzove yakavhurika uye vanogona kufemereka. Anogona kunge achiratidza kunyemwerera . Imbwa dzakadzvinyirirwa kana dzinotya dzinowanzo suka miromo yavo uye vanochengeta miromo yavo yakavharwa. Kune rimwe divi rechikero, imbwa iri kunyanyisa kufemereka kana isina kunyanya kupisa kana kuti isina kurovedzwa inowanzo simbiswa. Kumedza mate kana pasina chikafu chiripo chiratidzo chekushushikana imbwa. Mune imbwa ine hukasha, muromo unowanzo kuve pachena kupa kure. Vanogona kudzora miromo yavo uye kuunyana kumeso kwavo. Vanogona kubereka mazino uye kupopota. Iwe unogona kunzwa kudzika kwakadzika kuburikidza nemazino akakombana!
Nzeve Mune imbwa yakasununguka, nzeve dzavo dzinenge dziri muchimiro chavo, kunyangwe izvi zviri kumusoro kana pasi. Zviri nyore kuverenga nzeve dzembwa idzo dzinowanzo kuve nenzeve dzakanangana. Kana ivo vakamanikidzwa, ivo vanozorara zvakapfava uye kumashure. Iine imbwa dzinokatyamadza imbwa zvichiri kugona kuverenga nzeve dzavo, iwe unongofanirwa kutarisa pazasi penzeve dzavo; unogona kuona kufamba. Kufambira mberi kunoratidza kufarira, kufamba kumashure kunoratidza kushushikana kana kutya.
Muswe Imbwa yakamanikidzwa kana inotya inoisa muswe wayo pakati pemakumbo avo. Vanogona kuizunza zvishoma, asi zvishoma nezvishoma. Imbwa yakamutswa, inofarira kana ine hukasha inomutsa muswe wayo. Apa ndipo panopinda mimwe mitauro yavo yemuviri, kuti ikubatsire kusiyanisa manzwiro avari kuita.
Bvudzi Takataura vhudzi ravo kare - unogona kucherechedza imbwa dzine hukasha kana dzinotya, iwe unogona kuona kuti ivo muswe vanofarira kubuda zvakare. Imbwa dzakadzvinyirirwa zvakare dzinodurura bvudzi. Varidzi vazhinji vanocherekedza mawoko mashoma evhudzi achibuda imbwa yavo panguva yekushanya kweveti.
Mamiriro Tarisa imbwa yako yakajairika mamiriro - kana iri yakaoma uye yakatwasuka, unogona kubheja hupenyu hwako ivo havafarire nezve chimwe chinhu. Kana ivo vari kudzikatira kuenda, vachizviita ivo vadiki uye vachifamba zvisina musoro ivo vakanaka kunetseka.
Funga kuti iwe unobata nemitauro yemuviri wembwa yako? Ngatione.
Iwe unofunga chii chiri kuitika mumifananidzo iri pazasi?
Kana iwe usati uine chivimbo parizvino, verengazve iyo imbwa yemuviri chati chati pamusoro uye edza kutarisa iyo minomwe mienzaniso pamusoro.
Iyi ndiyo ingave mamiriro akakodzera mupaki imbwa.
Imbwa iri kurudyi inofarira, ine muswe yakatwasuka uye yakadzikama mamiriro kunyangwe ichizendamira kumberi.
Imbwa kuruboshwe inofara chaizvo ichinhuhwa, iye akasununguka mamiriro; zvakadaro muswe wake wakasimudza, izvi zvinogona kuve kubvumira imwe imbwa kunhuwa, kana iye amene anogona kunge achinhuwidza chimwe chinhu chinomufadza.
Iwe unofanirwa kubva watarisa kutarisa kwakamiswa pakati pembwa mbiri idzi.
Ivo vaviri vari kudhonza pane yavo leashes.
Uchaona vachena vemeso avo vari pa show.
Avo vaverengi vane maziso egondo vanozoona nzeve dzembwa kuruboshwe; hwaro hwe nzeve dziri kudzokera kumashure, zvichiratidza kutya. Iyi mamiriro haigone kupera zvakanaka.
Varidzi vanofanirwa kudzikamisa zvakadzikama uye kufambisa imbwa idzi dzive kure nemumwe.
Uku kunogona kunge kuri kushanya kune vets kune vamwe venyu.
Iyi imbwa zvechokwadi haidi kuvapo; musoro wake wakadzikiswa uye akatarisa kure.
Iwo machena eziso rake ari pachiono uye muromo wake wakamanikidzwa wakavharwa.
Anongoda kusara ega.
Pakutanga kuona iwe unogona kuona imbwa ine hukasha.
Iye ari anotya nehasha uye achikumbira kusiiwa ari oga. Iye ari kugara pasi sezvo iye asinganyatsoda kusangana.
Mazino ake akagezwa inyevero yekuti anongoda kusara ega.
Muswe wake wakasimudza unoratidza kumutsa uye kana yambiro ikasateererwa, anogona kuwedzera kuzvidzivirira.
Varidzi vanopedza nguva vachinzwisisa imbwa yavo mutauro wemuviri vanozviisa munzvimbo iri nani kwazvo pavanotandara imbwa yavo uye nekudaro vanodzivirira dzinogona kuitika njodzi.
Kunzwisisa imbwa mutauro wemuviri hakuna kuoma.
Kana iwe ukaona zviratidzo zvekutanga zvekuti imbwa yako haina mufaro unogona kuvabvisa kubva pamamiriro ezvinhu, zvisati zvanyanyisa kuvaremera.
Tinoziva kuti imbwa dzinodzidza zvakanyanya kuburikidza nekusimbisa kwakanaka uye nemubairo wakavakirwa pakudzidziswa. Kufashukira imbwa ine zviitiko zvekuti vanozojaira hazviwanzo kuve nemhedzisiro.
Kuona iwo madiki madiki uye nekunzwisisa maitiro avo zvinotigonesa kurera imbwa yakatsiga uye yakatenderera.
Mukutishongedzera kunzvenga idzo dzisingasviki imbwa dzine hushamwari mupaki uye pakupedzisira dzinozivisa imbwa yedu kuti kunyangwe ivo vasingakwanise kutaura, isu tiri kuyedza nepatinogona napo kuti tivanzwisise.
Imbwa yako yanga ichitaura newe nguva pfupi yapfuura here? Kune here chero mutauro wemuviri uyo imbwa yako inoratidza iyo isina kunyorwa pamusoro? Tiudze pazasi.
Maltese Shih Tzu Sanganisa Ropa Ruzivo
Caucasian Ovcharka Imbwa Inobereka Ruzivo & maQQ
refu bvudzi teacup chihuahua ruzivo
german shepherd imbwa labrador retriever musanganiswa
imbwa yangu inoramba ichikosora uye kuoma kwemhepo
mifananidzo ye english cream golden retrievers